Catalog: Holtop Qaybsan Hawo Qaboojiyaha Qaboojiyaha (Pump Heat)
Guudmarka alaabta ：
Holtop Air Qaboojiyey qaybsan Chiller yihiin our ugu dambeeyay alaabta ku saleysan ka badan labaatan sano oo cilmi-baaris & horumarin joogto ah, isku-soo-uruurinta teknolojiyadda iyo waayo-aragnimada wax soo saar taasoo naga caawisay inaan horumarinno chillers la xasilloon & waxqabadka lagu kalsoonaan karo, si weyn u hagaajiyey uumi bixiyaha & waxtarka wareejinta kuleylka. Sidan oo kale waa doorashada ugu fiican ee lagu keydiyo tamarta, ilaalinta deegaanka loona gaaro nidaam qaboojiye raaxo leh.
Holtop Hawada Qaboojiyaha Casriga ah Chiller u isticmaal hawada sidii il qaboojiye iyo biyo qaboojiye ah oo ah qaboojiye u adeegsada qaybaha dhexe ee qaboojinta hawada. Taxanaha wax soo saarka waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo caddaymaha awoodda qaboojinta laga bilaabo65 ku 130 kW iyo awoodda kululaynta oo u dhaxeysa 71 ku 141 kW. Waxay ku dabooli kartaa baahida culeysyo kaladuwan oo leh FCU iyo Nooca Iskujira AHU iwm Qalabka Terminal-ka wuxuu ka kooban yahay nidaamyo kala duwan oo hawo-qaboojiye kala duwan ah oo buuxin kara shuruudaha qaboojinta dhismaha. Cutubyadu waxay leeyihiin faa'iidooyin qaab dhismeedka is haysta, hufnaan sare, sawaxan hoose iyo cimri dherer, hawlgal habboon iwm Waxay ku siin kartaa dhammaan noocyada nidaamka qaboojiyaha iyo habraacyada biyo qabow. Holtop Qaybsan Hawo Qaboojiyey Chiller karaa si weyn loogu isticmaalo hxayawaan, hcaasimadaha, sboodbood malls, office buildings, cfarxadas, mwarshadaha etal, oil & ckiimikada ixayawaanka, mwax soo saar ixayawaanka, emuxaadaro ixayawaanka, exarumaha tamarta muxaadarooyinka iwm.
1. Ilaalinta isku dhafan ：Naqshadaynta wax ka badan 10 shaqooyinka ilaalinta amniga, taas oo xaqiijin karta cutubka chiller iyo nidaamka hawlgalka ee ilaalinta wareega oo dhan. Qaybta waxaa lagu xakamayn karaa iyada oo loo marayo nidaam kormeer oo kaladuwan oo kala duwan si loo hubiyo cutubka oo leh hawlgal xasilloon oo hufan.
2. Heerkulka Baaxadda leh ee Codsiga, Welwel la'aan howlgalka ：Unugga Chiller wuxuu ku habboon yahay hawlgal ballaaran oo heerkulka bannaanka ballaaran, laga bilaabo -20 ° C ~ 48 ° C.
3. Hawlgalka Cutubka Chiller Markuu Cilad Yimaado: Hal cutub ayaa loogu talagalay dhowr kombaresarada. Markii mid ka mid ah kombaresarayaasha uu guuldareysto, inta hartay ee kombaasaradayaasha nidaamka wali way u shaqeyn karaan si caadi ah iyagoon saameyn ku yeelan howlaha guud ee nidaamka.
4. iskudhafka qaybsan: Jiilaalku wuxuu qaataa naqshad isku-dhafan oo isku-dhafan oo uma baahna inuu dejiyo unugga sayidkiisa ama sub-master-ka. Isku-darka kasta wuxuu awood u leeyahay inuu isku xiro ugu badnaan 16 cutub, xitaa waxay ka samaysan yihiin moodallo kala duwan, si loo daboolo baahiyaha is-beddelka leh ee dhismayaasha kala duwan.
5. Tallaabada Bilowga: Bilaabida dhammaan cutubyada tillaabooyinka, si loo yareeyo socodka hadda bilaabmaya, loo yareeyo naxdinta korantada korontada, lagana ilaaliyo inay saameyn ku yeelato amniga qalabka kale ee korantada.
6. Codsiga Dabacsan Maalgashi: Kudar cutubyo dheeri ah isku dar wakhti kasta, oo kugu habboon marxalado badan oo maalgashi. Gaadiidka: Muga cutub kasta waa iswaafajsan yahay, waxaa loo qaadi karaa si shaqsi ah, uma baahna wiish ku yaal goobta mashruuca, wuxuu badbaadin karaa qiimaha gaadiidka. Rakibaadda: Uma baahna qolka mashiinka ama nidaamka biyaha la qaboojiyey, kaliya meel hawo fiican leh. Dhuumaha biyaha waxaa loo qaabeeyey dhinaca cutubka, kaas oo u sahlanaan kara isku xirnaanta biyaha iyo keydinta meel lagu rakibo. Nidaamka: Nidaamka wareejinta biyaha, marka lagu daro isticmaalka caadiga ah ee nidaamka socodka joogtada ah, waa ikhtiyaari in la isticmaalo bamka koowaad ee leh nidaamka socodka isbeddelka, iyo kabadhada xakamaynta xawaaraha isbeddelka ayaa ikhtiyaari ah in la xusho.
7. Nidaamka Daminta Smart: Adiga oo dareemaya nidaamka doorsoomayaasha badan si xukun sax ah looga yeesho xaalada qabowga, chiller-ka laftiisa ayaa awood u yeelan kara inuu doorto waqtiga ugu fiican ee uu soo geli karo ama ka bixi karo dhalaalinta, si looga fogaado kala-baxa ku filneyn ama kala-sooca badan. Nidaamka dabaq-dhiska, cutubyadu waxay ku guuleysan karaan kala-bixid kale. Markaad kululeyneyso xaaladaha heerkulka aadka u hooseeya, adigoo dejinaya buugga buurteynta waxqabadka wanaagsan.
8. Nidaamka Xakamaynta PLC ee Sirdoonka: Nidaamka xakamaynta PLC wuxuu isku daraa fududaanta iyo sahlanaanta nidaamka xakamaynta fiilooyinka iyo faa'iidooyinka nidaamka xakamaynta kooxda dhexe si loo gaaro xakamaynta kooxda dhexe ee chiller. Hal nidaam kontorool PLC wuxuu maamuli karaa 1 ilaa 8 koox. Koox kastaa waxay xakamayn kartaa 1 illaa 16 gogo 'chillers qaybsan. Nidaamku wuxuu xakamayn karaa ilaa 128 chillers qaybsan. Nidaamka xakamaynta ayaa sidoo kale bixiya astaamo kala duwan sida isbeddelka habka kooxda, hagaajinta heerkulka, xakamaynta / deminta, iwm si loo qaato codsiyo badan.
9. Helitaan Bilaash ah Nidaamka otomaatiga Dhismaha: Heerka isgaarsiinta dhismaha ee RS485 wuxuu la yimaadaa marin u furnaanta borotokoolka isgaarsiinta ModBus. Qalabku wuxuu si fudud ugu xirmi karaa nidaamka xakamaynta dhismaha (BAS) ee xakamaynta xarunta, si fudud loo gaadho xakamaynta caqliga, ka fogow qashinka tamarta aan loo baahnayn, iyo keydinta kharashyada hawlgalka qaboojiyaha.
Qaab / Qeexitaan HFW-65HA1 HFW-65HA1-L HFW-130HA
Nooca heerkulka caadiga ah Nooca heerkulka-hooseeya Nooca heerkulka caadiga ah Nooca heerkulka-hooseeya
Awoodda qaboojinta magaceed (KW) 65 63 130 130
Awoodda kululaynta magacooda (KW) 71 71 142 141
Qaboojinta Wadarta qiimeynta gelinta (KW) 19.5 18.7 39 37.7
Kululaynta Wadarta qiimeynta gelinta (KW) 21 19.5 42 38.8
Awoodda qaboojinta heerkulkeedu hooseeyo (KW) / 52 / 100
Wadarta awoodda soo gelinta kuleylka ee magacaaban (KW) / 18.6 / 37
Danab 380V / 3N ~ / 50Hz
Qaybaha ceejinta Waalka ballaarinta elektarooniga
Kombaresarada Nooca Wareeg Hermetic
Fan Nooca Taageero buuq hooseeya oo axial ah
Awood (kw) 0.9 * 2 1.5 * 2
Kala bedelka kuleylka hawada Qulqulka hawada (m³ / h) 14000 * 2 19500 * 2
Nooca Is-weydaarsiga kuleylka ee hufan ee wax-ku-oolka ah
Kala beddelka kuleylka ee Waterside Qulqulka socodka biyaha (m³ / h) 11.5 11.5 22.5 22.5
Nooca Qolof-kuleyliyaha wax ku oolka ah & kuleyliyaha kuleylka
Hoos u dhaca cadaadiska biyaha (kPa) 30 40
Dhuumaha / tubada tubbada tubbada tubbada tubbada DN50 DN65
Aragti W * H * D (mm) 1810 * 960 * 2350 2011 * 1100 * 2300
Miisaanka saafiga ah (kg) 580 600 1000 1050
Hore: Saqafka-qaboojiyaha Baakadaha Saqafka Sare
Xiga: Holtop DC Inverter DX Qaybta Qabashada Hawada
Nidaamka Unugga Chiller
Nidaamka Qaboojiyaha Hawo
Nidaamka Cutubka Biyaha La Qaboojiyey
Nidaamka Qaboojiyaha Hawada ee Qaaska ah
Nidaamka Chiller qaybsan
LHVE Taxanaha Joogtada ah Magnet iskudhafan ...
Ku marooji biyo qaboojiye Chiller